Mamwe ma2011 na2012 Macs Anogadzirwazve Nemamwe Makore Makumi eApple Tsigiro | Ndinobva mac
Mamwe ma2011 na2012 Mac anodzokororazve nemamwe makore maviri ekutsigirwa neApple
Nguva dzose kazhinji runyorwa rweMacs akaitwa apera neApple. Iyo frequency yekuvandudza Macs iri pakati pemakore mashanu neanomwe. Naizvozvo, panguva ino makomputa ari pakati pegore ra2012 na2011 ari pamusoro pekukwanisa kuoneka nekukurumidza kana kuti gare gare pane isingachashandi Mac
Asi panguva ino Apple yakafunga kuwedzera iyo technical service iyo yainogona kupa kune mamwe maMac kubva muna2011 na2012. Izvi zvinoreva kuti Apple uye vatengesi vanotenderwa vanofanirwa kuve neinotsiva maMacs kana ikatsiviwa nechimwe chikamu.
Ruzivo urwu rwunounganidzwa neyemukati Apple gwaro kune iyo midhiya yeAmerica yakawana mukana MacRumors. Zvikonzero nei Apple yaita iyi sarudzo hazvizivikanwe. Imwe nzira ndeyekuvandudza rudzi urwu rwemidziyo mumwedzi inotevera, uye nekudaro Apple ine zvikamu mukugadzira panzvimbo pekubvisa zvipenga izvo mune zvisingawanzo zviitiko zvinogona kushandiswa.
Chii chiri pachena ndechekuti midziyo iyi inenge isisashande pakupera kwaNyamavhuvhu 2018, asi zvichibva pane yakatarwa 2012 MacBook Air kana pakati pa2011 iMac, obsolescence haizosvika kusvika makore maviri gare gare. Muchidimbu kubva mugwaro raApple, pane tafura inotsanangura matsva matsva pasati pasisina nguva.
Mune gwaro irori, zvinoonekwa kuti imwe Mac modhi, 21.5-inch iMac uye iyo 27-inch modhi inowedzerawo kupinda kwayo mukushanduka. Mune ino kesi, inokanganisa chete United States neTurkey, uko mutemo unogadza aya mashoma paramende, sevimbiso yechigadzirwa.
Iyo nharo yakavhurwa zvine chekuita nesarudzo yaApple yekuisa timu pachikwata chevachachembera. Izvo ndezvechokwadi kuti Apple inofarira kutengeswa kwemidziyo mitsva uye kuti kutenderera kweMacs edu kunoitika makore mashoma apfuura. Asi kune rimwe divi, Apple makomputa akura kupfuura makore manomwe ari pazere nekugona kwekusanyanya-kushandiswa uye nekudaro, zvirinani Apple inofanira kupa technical technical kwavari.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Mamwe ma2011 na2012 Mac anodzokororazve nemamwe makore maviri ekutsigirwa neApple
Chenjerera Apple! Google inogadzirira kusvika kweiyo new watchOS
Rongedza uye verenga mafaera ePDF nePDP Office ye1 chete euro